By Htet Wai Aung February 03, 2017
မရွှန်းမီ ရေးပေးထားတဲ့ မြန်မာယူနီကုဒ် စာရိုက်နည်း pdf ကို One Drive မှာ ပြန်တင်ပေးထားတာပါ။
Ebook Keyboard Tutorial Window
Labels: Ebook Keyboard Tutorial Window
By Htet Wai Aung September 05, 2016
အသုံးပြုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ အသုံးပြုပုံအောက်ပါတိုင်းကိုလုပ်ပေးရပါမည်။ Download ရလာတဲ့ *.hwt File ကို Copy လုပ်ပြီး HWTheme Folder ထဲကိုထည့်ပေးပါ၊ ပြီးရင်ဖုန်း Setting > Display > FontStyle မှာ မိမိ၏ထည့်ထားတဲ့ဖောင့်ကို Apply လုပ်ပေးပါ။ MyanmarBook Theme font
https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidbUF1MkFCaTh3WUk KhunPaOh For Huawei Android KitKat.hwt
https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidMDRBbS1qYk5xcWc Hsi Hseng For Huawei Android KitKat.hwt
https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidQVluTEs0aEs1UWc MM Bagan For Huawei Android KitKat.hwt
https://drive.google.com/open?id=0B-dYNIHp2YidUlZDdldEX2ZFdEk MM Grand For Huawei Android KitKat
By Htet Wai Aung March 12, 2019
Pyihtaungsu Font Downloads Windows7– Microsoft Office အားလုံးအတွက် – Pyidaungsu-1.8_Regular.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
Mirror Link (Google Drive)
– Pyidaungsu-1.8_Bold.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
Windows 10 & 8 – Microsoft Office 2013, 2016 အတွက် – Pyidaungsu-2.5_Regular.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
– Pyidaungsu-2.5_Bold.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
iPhone, iPad အတွက် – Pyidaungsu-2.4.mobileconfig ဖောင့်ပရိုဖိုင် Safari Browser ကိုသုံး၍ ဒေါင်းပါ [DOWNLOAD]
Download Myanmar Unicode KeyboardsKeyMan Keyboard အသုံးပြုခြင်း
Download Myanmar Unicode Fonts Myanmar3 အဟောင်း – Myanmar3_MultiOS.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
Myanmar3 2018 – Myanmar3_2018.ttf ဖောင့် [DOWNLOAD]
Pyidaungsu Font (Myanmar Unicode)FAQ
(၁) ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုတာ ဘာလဲ?
ပြည်ထောင်စုဖောင့် ဆိုသည်မှာ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖောင့် အမျိုး အစား တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်သည် ယူနီကုဒ်စနစ် (Unicode) ကို လိုက်နာထားသည့် စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယူနီကုဒ် ဆိုသည် မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော အက္ခရာစာလုံးများ အတွက် မည် သည့် Platform တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် Program တွင် ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဘာသာစကား Language တွင် ဖြစ်စေ အက္ခရာတစ်ခုချင်းစီကို သီးခြား သတ် မှတ်ပေးထားသည့် ကုဒ်နံပါတ်များဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ် ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာတွင် အသုံးပြုသည့် စကားများအားလုံးမှ အက္ခရာစာလုံး တစ်လုံးတိုင်းအတွက် တိကျသော နံပါတ်တစ်လုံးတည်းသာ သတ်မှတ်ပေးထားသော ဘုံသုံး စံ စနစ် ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။
(၂) Myanmar3နဲ့ ဘာကွာခြားသလဲ?
ထိုသို့သော ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လိုက်နာရေးသားထားသည့် ပြည်ထောင်စုဖောင့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်သည် ယခင် Myanmar3ဖောင့် ကို အဆင့်မြှင့်ထားသည့် ဖောင့် ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (Myanmar4ဟု မခေါ်တွင်ဘဲ ပြည်ထောင်စုဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်) ။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်တွင် ယခင် Myanmar3ဖောင့် နှင့် အဆင်မပြေ မကိုက် ညီသည့် ကွန်ပျူတာ…